मंगलबारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने २० काम ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/मंगलबारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने २० काम !
मंगलबार खासगरी गणेश र हनुमानको आराधना गरिन्छ । यस दिन गणेशजीको आराधना गरे सम्पन्नत तथा सन्तान सुख मिल्ने र हुनमानको आराधना गरे हरेक कष्ट निवारण हुने गर्दछ ।यसरी मंगलबारको दिन भगवानको आराधना गरे लाभै लाभ मिल्नेछ । तथापी केहि कामहरु भने मंगलबारको दिन गर्न वर्जित गरीएको छ ।धर्मशास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन ति काम गरेमा हानि हुने साथै जीवनमा समस्या बढ्न सक्छ । के के हुन् मंगलबार गर्न नहुने कामः
१. मंगलबारको दिन कपाल वा दारी काट्नु हुँदैन । यसो गर्नाले स्वास्थ्य बिग्रने भय रहन्छ ।२. मंगलबारको दिन नङ काट्नु हुँदैन ।३. मंगलबारको पैसाको लेनदेन गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसले धन हानि हुने संभावना रहन्छ ।४. मंगलबार सकेसम्म घरमा हवन गर्नु हुँदैन । साथै हवन सामाग्री किन्नु पनि हुँदैन ।५. यस दिन सौन्दर्य सामाग्री खरिद गर्नु हुँदैन । अन्यथा वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ ।६. मंगलबार दूधका परीकार किन्नु, सेवन गर्नु वा दान गर्नु हुँदैन । भगवानलाई चढाउन भने हुन्छ ।
७. मंगलबार कालो रंगको कपडा धारण गर्नु हुँदैन । रातो रंगको कपडा लगाउनु उत्तम हुन्छ ।८. यस दिन फलामका सामान खरीद गर्नु हुँदैन । यसलाई अशुभ मानिन्छ ।९. मगंलवार ब्रत वस्ने वा दान गर्ने ब्यक्तिले गुलियो परीकार सेवन गर्नु हुँदैन ।१०. हनुमानको व्रत बस्ने मानिसले दुबै छाक नुनको सेवन गर्नु हुँदैन ।११. मंगलबार घरमा हनुमानको पुजा छ भने घर पूर्णतः शुद्ध राख्नुपर्छ । जुठो र फोहोर हुनुहुँदैन ।१२. मंगलबारको दिन धारिलो बस्तुको खरिद गर्नु हुँदैन । जस्तो चक्कु, छुरी कैचीं ।१३. मंगलबार भुलेर पनि आमासंग ठुलो स्वरमा कुरा गर्ने वा बहस गर्ने गर्नु हुँदैन ।
१४. मंगलबार पशु बलि दिनु हुँदैन । पशुवली दिएमा सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।१५. मंगलबार कुखुरा वा अन्य पंक्षीको हत्या गर्नु हुँदैन । अन्यथा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुन्छ ।१६. मंगलबारको दिन माछा खानु हुँदैन यसले आर्थिक नोक्सानी बनाउने गर्दछ ।१७. मंगलबारको दिन मासुको पनि सेवन गर्नु हुँदैन । मंगलबार मासु खँ“दा कुटुम्बको क्षय हुन्छ ।१८. यस दिन मदिरा सेवन गर्नु हुँदैन यसले क्रोध वृद्धि गर्ने र आपराधिक मानसिकता बनाउछ ।१९. मंगलबारको दिन झगडा गर्नु हुँदैन । अन्यथा आफ्नै बेइज्जत हुने खतरा रहन्छ ।२०. मंगलबार कसैसंग झुटो बोल्नु हुँदैन । यसले हानि निम्त्याउन सक्छ । बरु नबोल्नुहोस् ।